Films featuring Rajesh Hamal and Karishma Manandhar
Topic: Films featuring Rajesh Hamal and Karishma Manandhar
Author Topic: Films featuring Rajesh Hamal and Karishma Manandhar (Read 9397 times)
« on: March 12, 2015, 11:38:51 AM »
There is no doubt Rajesh Hamal and Karishma Manandhar are the most liked couple in the Nepali film industry.
Let's collect the names and details of the film featuring Rajesh and Karishma.
I was inspired to start this post by the post in xnepali movie blog. -- The movie "Partikchya"
Pratikchya --- प्रतिक्षा --> http://xnepali.net/movies/nepali-movie-pratikchya/
Paribhasha -- परिभाषा --> http://xnepali.net/movies/nepali-movie-paribhasha/
पापी मान्छे ---> http://xnepali.net/movies/nepali-movie-papi-manche/
ढुक् ढुकी ---> http://xnepali.net/movies/nepali-movie-dhuk-dhuki-karishma-manadhar-rajesh-hamal/
मायाज बार ---> http://xnepali.net/movies/nepali-movie-mayas-bar/
साथी --> http://xnepali.net/movies/nepali-movie-sathi/
पूजा --> http://xnepali.net/movies/nepali-movie-pooja-rajesh-karishma/
बन्धन --> http://xnepali.net/movies/nepali-movie-bandhan-rajesh-hamal-karishma-melina/
किन किन --> http://xnepali.net/movies/nepali-movie-kina-kina/
बरदान --> http://xnepali.net/movies/nepali-movie-bardaan/
आल्लारे --> http://xnepali.net/movies/nepali-movie-allare-rajesh-hamal-ashok-sharma-karishma-manandhar-shrisha-karki/
Sauta -- सौता --> http://xnepali.net/movies/nepali-movie-sauta-karishma-manandhar-bhuwan-kc/
हो यही माया हो --> http://xnepali.net/movies/nepali-movie-ho-yehi-maya-ho/
rajesh hamal and karishma manandhar 2.jpg (29.37 kB, 610x366 - viewed 443 times.)
Re: Films featuring Rajesh Hamal and Karishma Manandhar
« Reply #1 on: November 26, 2015, 05:28:37 AM »
« Reply #2 on: December 28, 2016, 04:03:13 PM »
राजेश हमालसंग फिल्म खेल्न करिश्मालाई रोकेको थियो परिवारले
महानायक राजेश हमाल । यो उनले कुनै संस्था वा राष्ट्रबाट पाएको उपाधी हैन । फिल्म प्रेमीहरुको प्रेमले पाएको उपाधी हो यो । यसरी महानायकसम्मको यात्रा तय गर्नका लागि उनले दुई दशकसम्म निर्वाध रुपमा आफ्नो अभिनय यात्राको पाइला निरन्तर रुपमा अगाडि बढाए । अहिले उनको यो यात्रा बाइसौं वर्ष पूरा गरी तेइसौं वर्ष प्रवेश गर्ने क्रममा छ । यी बाइस वर्षहरुभित्र उनले करीब तीनसय वटा फिल्ममा अभिनय गरे ।
यी तीनसय फिल्मको संख्यामा उनले कतिपय फिल्ममा प्रमुख भुमिका नै निर्वाह गरे भने केही फिल्ममा सामान्य भुमिका मात्रै निर्वाह गरे । राजेश हमालले थुप्रै फिल्महरुमा पोस्टर “पोस्टर आर्टिस्ट” बन्ने काम गरे । ती सबै फिल्मको नाम यहाँ लेख्न असम्भव छ । तर ती फिल्महरुमा राजेश हमालको हिरो गिरी हेर्न पाइने लोभमा ओइरीने गरेका दर्शकहरु भने नराम्ररी जिल्लिनु परेका धेरै उदाहरणहरु छन् । राजेश हमालले यसरी आफ्नो अनुहार मात्र देखाएको भरमा आफ्नो पूरा पारिश्रमिक असुले । त्यसैले धेरैले उनलाई धनको लोभमा जेपायो त्यही भुमिका गर्ने कलाकार पनि भन्ने गरेका छन् ।
राजेश हमाललाई यसबाट आर्थिक लाभ त निकै भयो होला तर उनको लोकप्रियता र प्रतिष्ठामा त्यस्तो कार्यले ठूलो ¥हास ल्याएको छ । अझ उनी माथि नेपाली फिल्मलाई ¥हासोन्मुख स्थीतिमा पु¥याउने हिरो भन्ने दोष पनि लगाउनेहरु नभएका हैनन् । यस विषयमा उनले एकपटक भनेका थिए, “नेपालमा फिल्मको विकास र मेरो करीयरको आरम्भ लगभग एकसाथ भयो । र त्यसले गर्दा मैले कस्तो फिल्म खेल्नु उचित होला भनि सोच्ने अवसर नै पाइन । त्यसैले जसले जस्तो सुकै भुमिका अफर गर्दा पनि मैले खेलिदिने अवस्था सिर्जना भयो र यो क्रम पछिसम्म निरन्तर चलि नै रह्यो ।”
उनको यो भनाई अनुसार त्यो त्यत्तिबेलाको अवस्थामा बाध्यात्मक थियो होला तर पछि पनि उनले कहिल्यै भुमिका चयन गरेनन् । जे आयो, फटाफट त्यो खेल्दै गए । भन्नेहरुले त यतिसम्म पनि भने कि नेपाली फिल्मलाई यस्तो दुरुह अवस्थामा पु¥याउनमा राजेश हमाल कै हात छ । किनभने यदि उनले आफ्नो भुमिका र फिल्महरु राम्ररी रोजेको भए यहाँ राम्रा फिल्महरु बन्ने वातावरण बन्न सक्थ्यो । तर त्यसो भएन भनि भन्नेहरु धेरै छन् । वास्तवमा एकातिरबाट हेर्दा यो सत्य जस्तो देखिए पनि सम्पूर्ण सत्य भने कदापि हैन । किनभने आफुलाई एकदम चूजी भनाउने कतिपय हिरोहरुका कतिपय फिल्महरु नराम्ररी पछारिएका छन् ।
राजेश हमालको फिल्मी करीयरलाई फर्केर हेर्ने हो भने उनले पहिलो पटक हिरो बन्ने अफर पाएको “भाग्य रेखा” को बारेका चर्चा गर्न जरुरी देखिन्छ । भारतमा उच्च शिक्षा अध्ययन क्रम मै त्यहाँ मोडलिंग गरीसकेका राजेश हमाल नेपाल आउँदा उनका मामा दीपक रायमाझी “भाग्य रेखा” बनाउने तयारीमा थिए । आफ्नो भाञ्जा पनि हिरो बन्ने चाहना राख्छ भनि जानेका निर्देशक रायमाझीले आफ्नो पहिलो फिल्म “भाग्य रेखा” मा राजेश हमाललाई नै हिरो बनाउने निधो गरे । केही दिन शुटिङ्ग गरे । तर शुटिङ्गको क्रममा मामा भान्जाबीच नराम्रो मनमुटाब भयो । फलस्वरुप “भाग्य रेखा” बाट राजेश निकालिए । आफूले पाएको पहिलो चलचित्र नै हातबाट गुमाउन पर्दा पनि राजेश हमाल अलिकति पनि विचलित भएनन् । शान्तपूर्वक अघि बढी नै रहे । जसको फलस्वरुप “भाग्य रेखा” बाट निकाल्ने उनका आफ्नै मामा दीपक रायमाझीले नै उनलाई फेरी “युगदेखि युगसम्म” मार्फत नेपाली फिल्ममा ब्रेक दिलाए ।
युगदेखि युगसम्म पछि उनले कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु परेन । उनका प्रारम्भिक चरणका फिल्महरु कसम, अधिकार, देउकी, गोपीकृष्ण, भिष्म प्रतीज्ञा, सिमाना, देउता जस्ता सबै फिल्महरु सफल साबित भए । वास्तवमा भन्नु पर्दा राजेश हमालले यी चलचित्रहरु पछि आफुलाई पर्दामा दोहो¥याउने काम मात्र गरे । कुनै नवीनता पस्कने काम गरेनन् । यसपछिका चलचित्रहरुमा “बसन्ती” मात्रै एउटा त्यस्तो फिल्म थियो, जसमा उनले सन्तुलित अभिनय गरे । राणाकालिण ऐतिहासिक पृष्ठभुमिमा बनेको यो फिल्ममा गगन सिंहको चरित्रलाई उनले जीवन्त पारे । राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव ६२ मा उनले यसै फिल्मबाट कृटिक्स अवार्ड पनि हासिल गरे । यी बाहेक उनका अरु फिल्महरुले कुनै ठूलो प्रभाव छोडेको देखिंदैन ।
राजेश हमाल सफल अभिनेता हुन् वा होइनन् यो कहिल्यै चर्चाको विषय बनेन । उनी लोकप्रिय अभिनेता हुन् । यो नै सबैको चासोको विषय हुने ग¥यो । यसले गर्दा उनले आफ्नो अभिनयको रेन्ज नाप्ने काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कहिल्यै अनुभुतसम्म पनि गरिएन । तर स्थीति अहिले त्यस्तो छैन । अहिले नेपाली फिल्म ईन्डष्ट्री नयाँ पुस्ताले भरीभराउ भएको छ । पहिला पहिला आफ्नो फिल्ममा राजेश हमालको एक सिनमात्र राख्नका लागि मरिहत्ते गर्नेहरु अहिले अर्कै नामको पछाडि दौडी रहेकाछन् । हुनत अहिले देखिएकाहरुमा पर्दामा राजेश हमालको जस्तो सबल उपस्थीति बोध गर्न सक्ने क्षमता त छैन तरै पनि राजेश हमाल अचेल पहिला जस्तो हरेक फिल्मको अनिवार्य बस्तु हुन छोडेको छ ।
अहिले उनी औपचारीक कार्यक्रमहरुतिर बढी देखिन थालेका छन् । जबकी पहिला उनी यस्ता कुरालाई महत्व दिंदैन थिए । “वास्तवमा पहिला म त्यस्तै थिएँ । तर समयको बहावसँगसँगै चरित्र पनि फेरिंदै जाँदो रहेछ । उत्तरदायित्व फेरिंदै जाँदो रहेछ । त्यसैले पहिले पनि म मेरो काँधमा आएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने गर्दथें भने अहिले पनि मेरो उत्तरदायित्व निर्वाह गरीरहेको छु ।” भनि आफ्नो अभिव्यक्ति दिने राजेश हमाल अहिले उनको सम्भावित विवाहको विषयमा बढी चर्चित छन् । हुनत उनको विवाह विगत एक डेढ दशक देखि सबैको चासोको विषय हुँदै आएको कुरा हो भने यो वर्ष उनको तथाकथित प्रेमिका मधु भट्टराईसितको सम्बन्धको कारण बढी चर्चामा छन् ।
राजेश हमालको विषयमा चर्चा हुने अर्को कुरा भनेको उनको फिल्मी जोडीका बारेका हुने कुराहरुलाई लिएर हुने चर्चा हुन् । जल शाह, निरुता सिंह, विपना थापा, गौरी मल्ल, कृष्टि मैनाली देखि लिएर रेखा थापा सम्मका अनगिन्ती हिरोइनहरुसित पर्दामा जोडी बाँधी सकेका राजेश हमालको लागि सबैभन्दा सुहाउँदो जोडी भनेको करिश्मा मानन्धर सितको जोडी हो भन्नेहरु धेरै छन् । हुन पनि साथी, उपकार, ढुकढुकी देखि लिएर केही महिना अघि मात्र रिलिज भएको फिल्म ‘किन -किन ‘ सम्म राजेश र करिश्मा जोडीले धेरैको मन जितिसकेका छन् । उनीहरु बीचको यो केमिष्ट्रीको अद्भूत छ । तर कुनै बेला एकपटक यस्तो पनि भएको थियो कि करिश्मा मानन्धरलाई उनको परिवारले राजेश हमालसित फिल्म खेल्न बर्जित समेत गरिदिए । जसको कारण “पृथीवी” फिल्ममा करिश्माको ठाउँमा मौसमी मल्ल लिनुपरेको थियो ।
यो त्यत्ति बेलाको ठूलो स्क्याण्डल थियो । राजेश हमालसित जोडिएको अर्को स्क्याण्डल भनेको एउटा पत्रिकामा प्रकाशित सर्वाङ्ग नग्न तस्वीर थियो । यो फोटो प्रकाशित भएपछि फिल्म नगरीमा ठूलै हडकम्प मचेको थियो । राजेश हमालले आफ्नो त्यो प्रकाशित फोटोबारे स्पष्टीकरण दिंदै भनेको थिए कि ती फोटोहरु आफ्नो शरीरका अप्रत्याशित रुपमा देखा परेका गाँठोहरुको उपचारको क्रममा खिंचेका हुन् । उनको यो अभिव्यक्तिको बाबजूद पनि त्यो प्रकरण सेलाउन भने निक्कै लामो समय लागेको थियो ।
राजेश हमालको लोकप्रियतामा उनको सरल व्यवहारको ठूलो हात छ । उनले कुनै पनि निर्माता निर्देशकहरुले दुःख दिएको कतै सुनिंदैन । तर शुरु शुरुमा अवस्था त्यस्तो थिएन । त्यत्तिबेला भर्खर भर्खरै मात्र सफलताको सिंढी चढ्न पाएका राजेश हमालले यति धेरै फिल्महरु साइन गर्न पुगे कि ती सब फिल्मको लागि समय सामञ्जस्यता कायम गर्न उनलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । एकै पटक शुटिङ्गमा रहेका अधिकार, कसम , देउकीका लागि डेट मिलाउन नसक्दा निर्माताहरु ज्यादै मारमा परेका थिए भने एकजना निर्माताले त उनलाई अपहरणको शैलीमा अर्काको शुटिङ्गबाट उठाएर ल्याउनु परेको थियो । विदुर वैद्य र दीपक मुणी बज्राचार्य निर्माता रहेको “सडक” को लागि राजेश हमालले डेट दिन नसक्दा ती निर्माताहरु नराम्ररी संकटमा फँस्न पुगेका थिए । ती मध्ये एक निर्माताको त मानसिक स्थीति समेत असन्तुलित हुन पुगेको थियो । तर पछि गएर राजेश हमालको कारण यस्तो कष्ट भोग्नु परेको कुरा कहिल्यै सुन्नु परेन ।
सानै बेला देखि लामो कपाल पाल्ने शौख भएका राजेश हमालले आफ्नो कपालको शैली थोरै पटक मात्र बद्लेका छन् । ती मध्ये एकपटक “द युगदेखि युगसम्म” को लागि कोरियन कट बनाउनका लागि थियो भने पछि “फर्की आउ” मा प्रहरी निरीक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न उनले केश कटाए । त्यसपछि राजेश हमालले आफ्नो आमाको निधन भएको बेला कपाल पुरै मुण्डन गराएका थिए । त्यही बेला उनले “मनको टुक्रा” चलचित्र खेल्दा कन्टिन्युटिका लागि क्याप लगाउनु परेको थियो । नत्र त उनी प्रहरी होस् वा सैनिक नै किन नहोस्, आफ्नो कपाल यथावतै राख्ने गर्दथे । अहिले “हँसिया” फिल्मका लागि कपाल छोट्याएका छन् भने बहु चर्चित नाटक “कोटमार्शल” मा सैन्य अधिकारीको भुमिका निर्वाह गर्न पनि उनले आफ्नो प्रिय कपालको बलिदान दिए ।
राजेश हमालका बारेमा चर्चा हने अर्को एउटा कुरा भनेको उनले आफु फिल्म निर्देशनको फाँटमा पाइला बढाउन चाहन्छु भनि भन्ने गरेको कुरा पनि पर्दछ । एकपटक उनले सन् २०११ भित्र आफू फिल्म निर्देशकका रुपमा अघि बढ्ने घोषणा गरेका थिए भने पछि उनको आफ्नो मामा निर्देशक दीपक रायमाझीको निधन हुँदा पनि स्व.रायमाझीको एउटा महत्वाकांक्षी फिल्म “डेस्टिनेशन काठमाण्डू ”को निर्देशनको जिम्मेवारी आफै वहन गर्ने कुरा अगाडि ल्याएका थिए । तर के कारणले हो कुन्नि उनले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेका छैनन् । आफ्नो पुरा युवावस्था फिल्मको लागि बलिदान गरेका राजेश हमालका बारेमा यस्ता झिना मसिना चर्चाहरु हुने गरेका बाहेक अधिकांशतः उनलाई सबैले सहज र सभ्य नायक नै भन्ने गरेका छन् । उनको दीर्घकालिन अभिनय जीवनको राज पनि वास्तवमा यही नै हो भन्नु उपयुक्त हुनेछ ।